नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्धित गर्ने कानुनको मस्यौदा तयार - Chandragiri News
Home समाज नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्धित गर्ने कानुनको मस्यौदा तयार
नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्धित गर्ने कानुनको मस्यौदा तयार
२०७७, ३० माघ शुक्रबार १८:४८
काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र खुलेका सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानसहित नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।
निर्देशिकाको दफा ४ मा व्यक्ति र संस्था दुवैले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिले दर्ता गर्दा नागरिकता अनिवार्य र संस्थाले दर्ता गर्दा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य छ । दर्ताका लागि प्राविधिक क्षमता, पेसागत दक्षता खुल्ने दस्ताबेज अनिवार्य पेस गरिनुपर्ने भनिएको छ । सँगै कार्यसञ्चालन योजना, आर्थिक र प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्नेछ । योग्यता पुगेका व्यक्ति र संस्थालाई सूचना प्रविधि विभागले पाँच वर्षसम्मका लागि सञ्चालन अनुमति दिने सक्नेछ । पाँच वर्षपछि भने नवीकरण गराउनुपर्नेछ । नयाँँँँfaceaca
Previous articleसूचना !!!सूचना !!!सूचना !!!
Next articleनागरिकताको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन माग